Qiimaha basaska iyo tareennada lagu raaco oo la kordhiyay -
Qiimaha basaska iyo tareennada lagu raaco oo la kordhiyay
Lacagta iyo qiimaha lagu raaco basaska iyo tareennada magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka naxaawiga la ah ayaa la kordhiyey.
Basaska iyo tareennada oo ah gaadiidka dadweynaha magaalooyinka mataanaha deggani intooda badani ay isticmaalan ayaa la kordhinayaa qiimaha lagu raaco.
Golaha iyagu maamula Gaadiidka Dadweynaha ee loo yaqaano Metropolitan Council ayaa manta oo ah Arbaco, bisha Luulyo ay tahay 7/26/2017 go’aan ku gaarau in ay qiimaha rakaabku ku raacaan basaska iyo tareennada ku kordhiyaan .25 cent qiimaha basaska, iyo gaadiidyadda kale ee degdega loo raaco, tareenka fudud iyo isticmaalka tareenada.
Sidoo kale waxaa .50 cent lagu daray qiimaha gaadiidka iyo adeegidda loogu yeero Metro Mobility ee ay isticmaalaan rakaabka ama dadka naafada ah.
Golaha ayaa sheegay Metropolitan Council ayaa sheegay in qiima la kordhiyey ay tahay markii ugu horeysay tan iyo sannadkii 2008.Golahan ayaa sidoo kale sheegay go’aankan lagu kordhiyey qiimaha in uu si rasmi ah u bilaabanayo koowda bisha October, 2017.
Qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha saacadaha caadiga ah oo hadda ah $ 1.75 ayaa noqon doona $ 2; halka qiimaha saacadaha shaqada la’aadayo ama laga soo rawaxo oo hadda ah $ 2.25 uu tegi doono $ 2.50.
Dadka ama rakaabka raaca gaadiidka loogu talagalay naafada, dadka waaweyn iyo waliba dadka iyagu qaba baahida gaarka ah ee loo yaqaano Metro Mobility ayaa iyagu bixin doonaa $ 3.50.